Natambatra ny hery eny ifotony tao Bira - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny voalohany volana febroary 2015 teo no nanombohan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) ao Antsirabe ny asa fanaovan-dalana. Vetivety ihany dia vita ny fanotorana ireo kilavadavaka eran’ny lalana tamin’ny alalan’ny fasika sy karao-bato ary ny simenitra. Sarotra hoy ireo teknisianina nentin’i HVM ny hanao godorao ny lalana amin’izao fahavaratra izao noho ny orana tsy an-kijanona isan’andro. Asa tana-maro no natao. Tsy diso anjara tamin’ity fanavaozana ity ihany koa ny fiaraha-miombon’antoky ny fokontany sy ny kaominina. Voatototra daholo ny lavaka ary namotehina vato mihitsy mba hanamafy izany. Tena efa ratsy tokoa manko teo aloha teo ny eo amin’ny sampanan’i Voaria noho ireo kamiao lehibe mihodina eo, ary isan’ny namotika ny lalana koa ny sarety avy any ambanivohitra. Saika rava tanteraka ny teo amin’i Voaria raha somary tara kely ny fandraisana andraikitra satria sady lavaka no fotaka, ary manginy fotsiny ny rano-potaka. Ankehitriny, efa vita ny fanarenana ny lalana ka tonga eo am-bavahadin’ny tsenan’Asabotsy izany. Amin’ny ankapobeny, nilamina ny olan’ny lalana, eny fa na ireo fahasimbana tamin’ny lalam-pirenena faha-7 aza, dia efa nisy fikojakojana avokoa. Deraina manokana amin’izany ny fahavitrihan’ireo namita ny asa lalana na dia tao anaty orana aza matetika ny asa. Ny lalana rahateo no anisan’ny soa lehibe iombonan’ny rehetra ary isika vahoaka no mahazo ny tombontsoa voalohany amin’izany. Tokony ho sarotiny amin’ny fanajana ny lalana ianao raha toa ka misy ireo manimba na tsy mitandrina azy. Samy mizàka ny vokatry faharatsian-dalana avokoa ny tsirairay rehefa tsy misy ny fitandremana sy ny fanaraha-maso akaiky.
Ambohimena : mbola Antsirabe
Vita tsy nisy hadino ny lalana raha vao hiditra an’Antsirabe ka mianatsimo tonga eny amin’ny orinasa SACIMEM Ambalavato, raha ny lalam-pirenena faha-7 manokana no jerena. Betsaka no niandry ny hitohizan’ny asa saingy nijanona izany. Hatreto aloha, hoy ny tompon’andraikitra, dia mbola tsy fantatra ny mikasika ny lalan’Ambohimena na hatao na tsia. Fa raha ny tokony ho izy anefa, ny lalam-pirenena aloha no laharam-pahamehana, ka tafiditra tsara ao anatin’izany Ambohimena. Ny mahagaga ny olona ihany koa, dia ity no tanàna isan’ny miantoka ny fandrosoan’Antsirabe noho ireo orinasa maro izay ao aminy avokoa, kanefa voasingana manokana tamin’ny fanamboaran-dalana natao. Hafa ihany koa ny fandaharan’asa eo anivon’ny fokontanin’Ambohimena, izay voalaza fa ny lalana mitsofoka anaty tanàna ihany no hamboarina tsy ho ela. Manahy mafy ny mponina ao an-toerana ny mety hisian’ny lozam-pifamoivoizana amin’ity lavaka be eo afovoan-dalana atsimon’ny tobin-dasantsy Jovenna ity. Ary raha tsy misy fijerena faran’izay haingana indrindra izany, dia tsy isalasalana ny fahatapahan’ny lalana. Mananosarotra araka izany ny fifamoivoizana ao Ambohimena noho ny haratsian’ny lalana, ary manoloana izay ihany koa, tery dia tery ny lalana ka samy mihafihafy na ny fiara na ny mpandeha an-tongotra. Io faritra io no be mponina indrindra ao Antsirabe ka inoana fa hovalian’ny tompon’andraikitra ny antson’izy ireo. Antony iray manampy trotraka ny faharavan’ny lalana ao Antsirabe ny rotsak’orana tafahoatra ka zary fotaka fotsiny no diavina manerana ny lalana anelankelan-trano. Ary ny mampatahotra aza hoy ity mpamily ity, dia ho asa very maina ny fanamboarana, satria malemy ny fasika sy ny karao-bato noho ny orana.
Tsy ny ao Antsirabe irery ihany no misedra izay olana lalana izay eto Madagasikara. Ny lalam-pirenena faha-9, mampitohy an’i Morondava sy Toliara mandalo an’i Manja, izay efa nasiam-panamboarana tamin’ny 2014 aza moa dia simba sahady, hany ka tena mihitsoka tokoa amin’izao fotoana izao ny vahoakan’i Manja ary mihidy tanteraka ny lalana.
Fanamarihana kely, tsara tokoa ny mahita vondron-kery mandray andraikitra saingy sao mba tsy an'ny antoko politika ny manamboatra làlana fa manomana lalàna hanamora ny fanamboarana ny làlana no andraikiny na manery ny fanjakana hanmboatra ny làlana no ataony?